Gadza Zvinotarisirwa neChibvumirano chekugamuchira | Martech Zone
Svondo, Kurume 22, 2009 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Sawe mushambadzi, iwe unenge uchivimba nezvakawanda zvechitatu bato kunyorera uye zviwanikwa kuunza ako makwikwi kuhupenyu.
Ini ndambonyora nezve nezve sei kuisa tarisiro nevatengi vako kunotyaira kugutsikana kwevatengi… Pane zvakare nzira iyo iwe yaunogona kubatsira kutyaira iwe pachako kugutsikana - kuvaka chibvumirano chekubvuma kugadzirisa matauriro neako wechitatu bato hukama.
Zvibvumirano zvekugamuchira zvinogadza mimwe mitemo yemutambo kune vatengesi vaunoshanda navo usati watanga. Kugamuchirwa zvibvumirano zvine zvinhu zvakaita se:
Ndiani muridzi wepfuma purojekiti.
Ndiani ane zviwanikwa (mifananidzo, kodhi, nezvimwewo)
Kunyangwe kana kwete kubhadhara kunonoka kana zvikwereti zvichaitwa kana basa risina kupedzwa mukati menguva yakavimbiswa.
Rini uye sei zviwanikwa zvichachinjiswa muchiitiko chekuti hukama hunoenda kumaodzanyemba.
Kunyangwe kana kwete iye wechitatu mukana anogona kupa chirongwa uye kushanda kune mamwe makambani kana zviwanikwa.
Kunyangwe kana chechitatu bato rinogona kusimudzira basa ravari kuita.
Pamwe iwe unotova nezvimwe zvaunofarira kana zvausingade paunenge uchishanda nevatengesi, kusangana nenguva, mapfekero, magwaro, mafomati, nezvimwewo. mugwagwa. Ndinogona kuvakurudzira!
Zvakawanda senge chibvumirano chevashandi nevashandi vako chinodzivirira kusawirirana nevashandi, chibvumirano chekubvuma chinogona kudzivirira nyaya nevatengesi uye vechitatu zviwanikwa.
Tags: muchinda wekuparadziraTsvaga Kutengesa